Business Microloans - Mission Asset Fund
तपाइँको क्रेडिट निर्माण गर्दा तपाइँको ब्यापार लाई बढावा दिनुहोस्
अब आवेदन दिनुहोस्
एक 0% ब्याज microloan प्राप्त गर्न, चलाउन, वा तपाइँको ब्यापार बृद्धि गर्नुहोस्।
प्राप्त गर्नुहोस् एक 0% ब्यावसायिक माइक्रोलोन ($2,500 सम्म) कुनै पनि ब्यापार व्यय को कवर गर्न को लागी
तपाइँको ब्यापार लाई बढावा दिनुहोस्
MAF को व्यापार Microloans साना व्यवसाय मालिकहरु र क्यालिफोर्निया मा उद्यमीहरु लाई समर्थन गर्न को लागी डिजाइन गरीएको हो। यो शून्य ब्याज १TP2T2,500 microloan संग, तपाइँ कुनै पनि व्यवसाय सम्बन्धी लागत कभर गर्न वा buildingण निर्माण गर्दा कभर गर्न सक्नुहुन्छ।
आफ्नो व्यापार IDEA विकास गर्नुहोस्
तपाइँको ब्यापार सुरु गर्नुहोस्
तपाइँको ब्यापार बढाउनुहोस्
तपाइँको व्यवसाय को बारे मा प्रश्न वा चिन्ता छ? द्वारा MAF को व्यापार कोच संग कुरा गर्नुहोस् एक नि: शुल्क अनलाइन नियुक्ति को समय तालिका आज!
“MAF को ब्यापार loanणले मलाई समर्थन गर्‍यो जब मलाई यो सबैभन्दा धेरै चाहियो। मैले सामान किनेर लगानी गरेको छु। मैले गरेको बिक्री संग, मँ पर्याप्त पूँजी स collect्कलन र छिटो मेरो भ्यान तल तिर्न सक्षम थिए.”
सोफिया, सैन फ्रान्सिस्को, CA
व्यापार Microloan कार्यक्रम
1. बिजनेस कोचिंग पाउनुहोस्
चाहे तपाइँ ब्यापार सल्लाह, संसाधन, वा एक योजना बनाउन को समर्थन को जरूरत छ, हामी दृढता संग कार्यक्रम मा भर्ना हुनु भन्दा पहिले तपाइँ MAF को बिजनेस कोच संग कुरा गर्न को लागी प्रोत्साहित गर्दछौं।
2. एक माइक्रोलोन को लागी आवेदन दिनुहोस्
MAF को व्यापार Microloan को लागी एक सरल अनलाइन आवेदन भर्नुहोस्। नि: शुल्क अनलाइन वित्तीय शिक्षा पाठ्यक्रम सहित सबै कार्यक्रम आवश्यकताहरु पूरा गर्नुहोस्।
3. बूस्ट बिजनेस
आफ्नो microloan अनुमोदित र तपाइँको बैंक खाता मा सीधै जम्मा पाउनुहोस्। कुनै पनि व्यापार खर्च को लागी धन को उपयोग गर्नुहोस् र तपाइँको क्रेडिट निर्माण गर्न को लागी समय मा मासिक भुक्तानी गर्नुहोस्!
के तपाई सामेल हुन तयार हुनुहुन्छ?
निम्न प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् कि यदि तपाईं कार्यक्रमको लागि योग्य हुनुहुन्छ भने।
MAF को साथ एक loanण औपचारिक बनाउन को लागी तपाइँ १ 18 वा पुरानो हुनु पर्छ। यदि तपाइँ १ under बर्ष मुनिका हुनुहुन्छ र यस कार्यक्रम बाट लाभान्वित हुन चाहानुहुन्छ भने, तपाइँको आमा बुबा वा कानूनी अभिभावकले तपाइँको फाइदा को लागी loanण लिने बिचार गर्न सक्छ।
म १ 18 बर्ष वा माथिको हुँ
यो कार्यक्रम मात्र क्यालिफोर्निया बासिन्दाहरु को लागी उपलब्ध छ।
म क्यालिफोर्निया मा बस्छु
सुविधा र सुरक्षाको लागि हामी तपाईंको चेक खाताबाट पैसा पठाउन र प्राप्त गर्न इलेक्ट्रोनिक भुक्तानहरू प्रयोग गर्दछौं। हामी तपाईंलाई एक जाँच खाताको प्रमाणको लागि सोध्छौं, जस्तै बैंक स्टेटमेन्ट वा भोरिडेड चेक, स्वचालित भुक्तानी सेट अप गर्न।
मेरो नाममा मेरो जाँच खाता छ
तपाइँलाई identityण जारी गर्न हामीले तपाइँको पहिचान प्रमाणित गर्न आवश्यक छ। हामी संघीय, स्थानीय र विदेशी जारी ID हरू स्वीकार गर्दछौं जुन तिनीहरू हालको छ - र म्याद समाप्त भएको छैन।
मसँग हाल चालक इजाजत पत्र, राज्य आईडी, वा अन्य सरकार द्वारा जारी फोटो आईडी छ
हामी तपाईंको सामाजिक सुरक्षा नम्बर (SSN) वा तपाईंको व्यक्तिगत कर पहिचान नम्बर (ITIN) तपाईंको परिचय प्रमाणित गर्न अनुरोध गर्दछौं।
मसँग एक सामाजिक सुरक्षा नम्बर (SSN) वा व्यक्तिगत कर पहिचान नम्बर (ITIN) छ
तपाईंको सफलताको लागि एक गैर नाफामुखी प्रतिबद्धको रूपमा हामी यो कुरा निश्चित गर्न चाहन्छौं कि यो youण तपाईंको लागि सही छ। हामी तपाईंको भुक्तानी stubs वा बैंक स्टेटमेन्ट समीक्षा गरी तपाईको मासिक भुक्तानी गर्न सक्षम छौं भनेर तपाईको आय प्रमाणित गर्छौं। यदि तपाईं आफैंले आय कमाउनुहुन्न भने हामी तपाईंको परिवारको सदस्यबाट पाउने आम्दानीमा भर पर्न सक्छौं।
म, वा मेरो परिवारको कोही, एक आय कमाउँछु
हामी तपाईंको debtणको बारेमा सोध्छौं तपाईंको वित्तीय जीवनको राम्रो तस्वीर पाउनको लागि। यदि यो पहिले नै तपाइँको मासिक obligण दायित्व पूरा गर्न को लागी एक तनाव छ भने, हाम्रो कार्यक्रम तपाइँ को लागी सबै भन्दा राम्रो फिट हुन सक्दैन।
मेरो मासिक debtण भुक्तान मेरो परिवारको मासिक आम्दानीको आधा भन्दा कम हो
तपाईं यस कार्यक्रमको लागि योग्य हुनुहुन्छ
दुर्भाग्यवस, यस्तो देखिन्छ कि तपाईं निम्न प्रतिक्रियाहरूका कारण योग्य हुन सक्नुहुन्न:
ओह तस्वीर! म अहिले योग्य छैन
वास्तवमा, म सबै आवश्यकताहरू पूरा गर्दछु